25 Musharixiinta Haweenka ah ayaa ku baasay Imtixaanada Wadista Wadista Baska Mersin - RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean33 Mersin25 Musharixiinta Haweenka ah ayaa ku Baastay Imtixaanada Wadista Wadista Baska Mersin
24 / 02 / 2020 33 Mersin, Coast Mediterranean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
haweenay musharrax ah ayaa ka gudbay imtixaanka isteerinka ee heerka sare ee baska
Waaxda Gaadiidka Dawladaha Hoose ee Magaalada Mersin waxaa lagu dhawaaqay 10-ka Febraayo iibsashada 184 wadayaasha basaska. Natiijooyinka wareysiyada laga qaaday kaqeybgalka 744 murashax, wadarta 450 murashax ayaa xaq u leh inay galaan imtixaanka isteerinka ugu dambeeya. Murashaxiinta loo tababbaray astaamaha farsamada ee gaariga hareeraha xerada Macit Özcan Sports Complex ayaa loo qaaday imtixaanka isteerinka.
25 murashax, 425 haween ah iyo 450 rag ah, ayaa loo qaaday imtixaanka isteerinka
Dawlada Hoose ee Magaaladu waxay higsaneysaa inay sare u qaaddo tayada adeegyada gaadiidka dadweynaha ee magaalooyinka iyadoo la siinayo shaqo raadinta dadka shaqo doonka ah iyadoo lagu darayo 184 darawalada basaska cusub. Dowladda Hoose ee Magaalada, oo loogu dhawaaqay iibinta darawalka basaska 10-ka Febraayo, ayaa wareysatay 17 qof, oo 27 ka mid ahi ay haween ahaayeen 717na ay rag ahaayeen, Xarunta Magaalada Caabudwaaq iyo Bandhigga Bandhigga. Natiijooyinka wareysiyada ka dhacey, guud ahaan 744 murashax, 25 haween ah iyo 425 rag ah, oo xaq u leh inay galaan imtixaanka isteerinka, ayaa loo qaaday imtixaanka isteerinka.
Musharaxiinta galaya 184 ee ugu horeeya imtixaanka waxay xaq u leeyihiin in la shaqaaleeyo
Imtixaankii isuduwaha, oo ay wada galeen 2 bas oo wadar ah, oo 5 ka mid ahi ahaayeen tababaro iyo 7 bas oo darawalnimo ah, ayaa socday 2 maalmood wuxuuna socday 4 kalfadhi. Imtixaanka ka hor, shaqooyinka badhamada qolka gaariga darawalka ee gaariga waxaa loo sharxay musharraxiinta. Haweenka musharraxiinta ah waxaa loo qaaday imtixaanka isteerinka marka hore. Imtixaanka, ayaa la cabiray awoodda musharraxiinta, feejignaanta iyo dareenka qawaaniinta. Musharaxiinta galaya 184-ka ugu horeeya waxay xaq u yeelan doonaan in lagu qoro imtixaanka, oo ay kujiraan codsiyada sida ka soo laabashada isgoyska, u dhawaanshaha joogsiga, ka soo qaadida rakaabka naafada ah joogsiga, saxda bixinta iyo soo celinta.
Sinnaanta ayaa la filayay inay hadda dhacdo Madaxweynahayaguna wuxuu bilaabay inuu soo bandhigo ”
Merve Sağ waa mid ka mid ah 25ka haween ah ee u tartamaya imtixaanka wadista basaska ee Dawlada Hoose. Isaga oo sheegay in uu wade ka ahaa ilaa 29 sano, Sa, wuxuu sheegay in uu wax ka baranayay rinjiyeynta jaamacadda. Isagoo carabka ku adkeeyay inuu daneynayo wadista baska laga soo bilaabo da 'yarta, Sa that wuxuu muujiyey inuu ka dalbaday Dowlada hoose ee Magaaladda Metropolit inuu helo shaqo riyo. Merve Sağ wuxuu yiri:
Uma arko shaqadan mid rag ah waxaanse aaminsanahay inaan guuleysan doono. Waxaan u maleynayaa in sinnaanta ay ahayd in hadda la sameeyo oo Madaxweynahayagu bilaabay inuu tan ku bixiyo magaaladeena. Waxaan rabaa inaan gaaro shaqadan, oo loo arko shaqo lab, iyo inaan hubiyo sii wadida. Runtii waxaan ugu mahadnaqayaa Madaxweynaheenna fursad noo siisay. Sababtoo ah waqti ka dib, rajo-beelku wuxuu bilaabaa inuu duubo. Annagu dumar ahaan waxaan dareemaynaa sidii waxna aan dhici karin, oo waxaan la kulannaa is-tixgelin hoose ama si uun u carqaladeeya. Laakiin Madaxweynahayagu wuxuu fursadan siiyay haweenka. ”
"Waxaan sidoo kale rabay inaan qaato xorriyadeyda dhaqaale"
Hooyada seddexda carruurta ah, Meryem Fedakar, ayaa sheegtay inay codsatay shaqo si ay ula kulanto kharashaadka waxbarashada ee carruurteeda, oo laba ka mid ah ay jaamacad tahay iyo mid ka mid ah ardayda dugsiga hoose. Isagoo sheegay inuu leeyahay 3 sano oo waayo-aragnimo u gaar ah, ayuu Fedakar yiri, “Madaxweynaheygu wuxuu siiyay fursad noocaas ah waxaanan doonayay inaan ka faa'ideysto fursadan. Waxaan doonayay inaan taageero iyaga ilaa wiilashaydu ay dhammeeyaan kulliyadda. Xaaskeygu waa howlgab, iyadoo qaadatay mushahar yar. Anigoo ah haweeney Republican ah, waxaan rabay inaan qaato xorriyadeyda dhaqaale. ”
Raziye Yıldırım oo 28-jir ah ayaa yidhi, "Horey ayaan u arkey dumarka darawalka baska ah, waan jeclaaday waana rabay. Waxaan dalbaday maxaa yeelay waxaan aaminsanahay inaan shaqadan sidoo kale qaban karo. ”
Dumarku waxay awood u yeelan doonaan in ay wadaan metrobus.